ikhaya » Okufumaneka » I-IP Interop Isingathi, i-Virtualization yiNyathelo Elilandelayo
I-IP Interop Isingathi, i-Virtualization yiNyathelo Elilandelayo
NguJames Stellpflug, iMveliso yokuThengiswa kweMveliso, EVS
Ukutshintshwa kwembali kumashishini okusasazekayo okwenzekayo. I-IP kukuqala kwenguqu equka, kodwa ayipheli ngokugqibelela. Le yinyathelo elilandelayo ekuziphenduleni kwe-IP kwaye kuphela xa iinkalo eziphambili zokuvelisa ubomi ezifana neeseva zokuvelisa ividyo, abaguquleli kunye nokucubungulwa kwekhamera kulungiswe ngempumelelo siya kuqala ukufumana inzuzo yezobuchwepheshe.
Kule ngongoma, enye yimiqobo emikhulu kuye kwaba ukungakwazi ukuvelisa igalelo kunye nesiphumo sempawu zokungena kwiindawo ezifana ne-SDI. Iinkqubo zibophelelwe kwi-interface yomzimba, ekhusele ukuqhubela phambili kwi-domain live. Kodwa ngemigangatho ye-IP kunye nentsebenziswano ephuhlisiwe phakathi kwamaninzi kuwo wonke umashishini, siye sakwazi ukuqeda ezo zixhobo. Ubudala bokuba ubuchule bukhona ngoku.
Siyazi ngokucacileyo ukuba iinkqubo ezisetyenzisiweyo sele zisetyenzisiweyo namhlanje - ngakumbi kwiinkqubo zoshishino, izixhobo zokucwangcisa ukulawula, kunye nokusetyenziswa kweefayile. Kwaye i-IP ibe ngumncedisi walo, imisebenzi exhasayo eyenziwe kwiinkcukacha eziqhelekileyo zeziko ledatha kunye nezixhobo eziqhelekileyo zeekhompyutha. Ngokuhlukana okusebenzayo - ukucima ukulawulwa kwenethwekhi kunye nokuthumela imisebenzi - inethiwekhi yokwenza umsebenzi kunye nokuzenzekelayo, abasebenzisi banokulawula ukuhamba kweetrona kwi-console ephakathi.
Le yilapho imodeli yokuvelisa imveliso ifumaneka. IP-enabled, i-software-ichazwe, i-COTS ye-hardware. Oku konke kukhula ngokugqithiseleyo indlela yokufuduka kude kwi-hardware ezinikeleyo, kwi-software kunye nelofu.
Yintoni eqhuba imarike?
Sonke sivile ngeenzuzo ezikhawulezileyo ze-IP kunye nobuchule - ukuguquguquka okungakumbi, ukuveliswa okuvelisiweyo kunye noqoqosho olungcono lwezinga. Kodwa kukho inkulu yemarike yomsebenzi kwimisebenzi. Iiseti zeTV kunye nokusasaza kwendabuko akuyi kuhamba kodwa ngexesha elifanayo, abasasazo kunye nabanini bomxholo kufuneka benze umxholo ongaphezulu, ngokukhawuleza ukujamelana nemikhwa yabathengi beendaba abaxhunyiwe namhlanje.
Ngelixa abantu bebebukela i-TV engaphantsi kwemveli, bajonga ividiyo. Zidla ividiyo ngaphezulu xa kwaye kwaye zifuna kuphi - ngokwabo ngokwemiqathango yazo nakwiidivayisi zazo zonke iintlobo. Kulo hlabathi elitsha leziteshi ezingabonakaliyo, imfuneko yokupasa umveliso osebenzayo okanye uphantsi kweemfuneko kubalulekile. Kwaye kufuneka yenziwe ngendlela ekhawulezayo neyindleko. Yilokho okuqhuba ukuhamba kude nakwiziseko zophuhliso lwezinto zokusebenza.
Kwaye ngoxa iinguqu zokuqala kwiinkqubo ze-IP ezisisiseko ziya kufuna ukukhutshwa kwenkcitho ethile yenkcitho, iindleko zendleko zexesha elide zikhulu kakhulu. Ngokumalunga neendlela ezintsha zokuveliswa komxholo, imfuno yamashishini omtsha kubonakala. Ngelixa sisuka kwi-workflows eqhutywe nge-hardware, siza kusuka kwi-capex-based operation kwi-opex-based-based-use-model model.
Ngaphezu koko, akunakwenzeka ukucinga iinkqubo zemveli-point-point zihlangabezana neemfuno zamashishini okusabalalisa amashishini kunye namanqaku oshishino.
Kodwa konke oku kufuna iqondo lokucwangcisa, ukuphinda ucinge ngokuphuhliswa kwemveliso (okanye mhlawumbi ngokuchanekileyo ukuphuculwa kweenkonzo ze-IT) ukukhutshwa kunye nokuphila kwempilo. Ingumcimbi wendlela kwaye nini, kungekhona ukuba.
Uhlobo oluthile lokuveliswa kwendalo
Isihluthulelo sokwenza ubuchule sidibanisa izixhobo zokugcina izixhobo kunye nokugcinwa kwezixhobo zokusebenza. Iimpahla ze-COTS kunye nezixhobo eziqhelekileyo zeekhompyutha ziza kuthunyelwa ukuze zongeze imisebenzi emitsha kunye nemigaqo-siseko yeziko leenkcukacha kwiintliziyo zabo. Oku kuthetha ukuba izixhobo zingabelwa kwiimfuno ezithile kunye nexesha elikhoyo kwanoma yimuphi umveliso.
Umzekelo omhle ukusetyenziswa kwezinto ezongezelelweyo ze-transcode. Iinjini zeTranscode ziya kuqaliswa kwisiseko esifanelekileyo kunokuba kusetyenziswe phambili imithombo ethile yevidiyo. Into eyayingenakwenzeka kwiminyaka edlulileyo, olu hlobo lokuguquguquka ngokugqithiseleyo luqala kuphela apho singaya khona. Le nqununu iyakwandiswa kwii-switches zevidiyo, iinkonzo kunye neenkqubo zokuvelisa jikelele, ukuphula izibambiso zoshishino ukuguquguquka, nokuvumela ukuhanjiswa kwevidiyo kunye nezinye izibonakaliso kuzo zonke indawo ezikhoyo.
Isixhobo sesibini esisisiseko sokwenza ubuchule kukusetyenziswa kwezixhobo eziqhelekileyo zesekethe. Kukho nawuphi na inkqubo, iifayili ezizinikeleyo ezixhomekeke kwimisebenzi ethile ibeka imida. Ngokuphambene nokuxhaswa kwe-SDI-based and node-assisted compute nodes, yonke imvelo ye-IP ivumela ukulungelelaniswa okufunekayo ukunika iinkonzo kuyo nayiphi na incedisi yezixhobo ezikhoyo.
Ukuguquguquka kwemigangatho yokugqibezela akupheli ngemisebenzi ethile - yonke imveliso yokuveliswa kwemveliso ingasetyenziselwa kumaziko eenkcukacha ezisezantsi okanye kwiziseko zophuhliso njengenkonzo efana nelifu. Ngayiphi na indlela, ubuchule buza kudala iziseko ezingabonakali nje kuphela kodwa ngokukhawuleza ukuzisebenzisa.
Kwakhona kunika amandla ama-workflows angabonakaliyo ahambisa kuphela izixhobo ezifunekayo ngelixa kulungelelanisa ukwabelana ngokubanzi kwezibonelelo. Ngokuhlukana okusebenzayo, ukwenziwa komnatha kunye nokuzenzekelayo, abasebenzisi bangakwazi ukulawula i-traffic ukusuka kwi-console ephakathi kunye nenkululeko entsha yokwenza imveliso kunye nobuchule. Indlela yokucwangcisa i-software ingabonelela nge-demand-transcoding, ukufunyanwa kunye nokudlala kwe-playout, kunye nokulungiswa kwezinto ze-hardware. Ukukwazi ukuvula nokucima, kunye nemisebenzi yokunyuka kunye neyehla ivelisa ukunyaniseka okukhulu kunye ne-capex yokugcina. Ukucwangciswa kunye nokuthunyelwa kulula, ukudala iimveliso ezinokutshintsha okanye zikhule ngokukhawuleza ngaphandle kokufuna ukubeka iziseko ezingaphezulu okanye ukuthenga izinto eziphathekayo.
Emva kokuba izakhiwo ezilungisiweyo kunye nezibonelelo zaso zikhoyo, indlela ezilawulwa ngayo ziba luhlu olongezelelweyo lwenzuzo. Abasebenzisi baya kuba nako ukuchaza ngaphambili iimfuno zemveliso, isitoreji, ukukhumbula nokuqalisa ukulungelelaniswa kwemveliso ngexesha elifunekayo. Ngesiseko se-COTS, iimpawu zobunjineli azibandakanyeki ukuqala nokukhusela umveliso. Ukugqithisa ukuvumela ukuqaliswa kwezicelo kunye nokusebenza kwempahla njengoko kuyimfuneko kwaye kuququzelela ukuthutha kwiziseko zesefu zoluntu kwiinkampani ezinkulu ze-IT ezinkulu.
Ukuveliswa kwemveliso Amandla
Kuthathwe ndawonye, ​​abaqeshi kunye nekhono lokwenza ubuchule banikezela oko sikubizayo ukuveliswa kwemveliso. Oku kwenziwa ngezisombululo ezibonisa i-COTS ye-hardware, ukwandisa utyalo-mali olukhoyo kwaye usebenzise imigangatho evuliwe exhaswa yi-AIMS kunye SMPTE. Nge-IP kunye nobuchule kwi-core, ukuveliswa kwemveliso ivumela ii-studios, abasasazo kunye nezindlu zokuvelisa ukwenza okungakumbi ngokuguquguquka okungcono kunye namandla.
Imisebenzi yokuchazwa kwemveliso yeefayile kunye nemisebenzi esekelwe kwiseva - kunye neenkqubo ezipheleleyo zokuvelisa zivumela iinkqubo ezahlukeneyo ezidala iinkqubo eziguquguqukayo. I-Workflows akumele iqwalaselwe ngokulula kwaye isetyenziswe kodwa iphinde ishintshwe kwaye iqhutywe kwiziseko ezingekho ngaphandle kwe-capex. Isiphumo sinene ukuveliswa kwemveliso, ukukhula okanye ukuncipha kusekelwe kuphela kwiimfuno ezikhoyo ukufezekisa imveliso, iguquguqukayo kunye nemveliso yokugcina imali.
Kakade, i-IT-based full, i-centered production center ephakanyiswayo yodwa ayikho indlela esisebenzisa ngayo iteknoloji yokuvelisa namhlanje, ngaphandle kwamathuba amaninzi. Okweninzi, kuya kubakho umendo wokuguqulwa, okhusela utsalo-mali olukhoyo ngelixa uhamba kwi-IP. Ukufudukela ekusebenziseni ubuchule sele sele kuqalile ngemisebenzi engekho yangempela.
Izixazululo ze Gateway kunye nobuchwephesha njengabaguquli be-link-to-point connecting links - i-RS422 kunye ne-USB ngaphezu kwe-IP izixhumanisi - kunye neefayile ze-IP ziza kubhuqa iinkqubo ngexesha leenguqu, njengoko ziya kuxubusha iingxoxo malunga nendlela ukuvumelaniswa kwehlabathi jikelele kwi-IP nakwi-SDI kungafezekiswa - nokuba ngokusebenzisa ukuvala ukuvelisa okanye ukuvumelanisa okusebenzayo usebenzisa i-PTP.
Iziko elivelisiweyo lokuvelisa ngomso
Kodwa yintoni esiza kubonakala ngathi iziko elivelisiweyo elenziwe lilungiswe ngokupheleleyo? Kulungile, kusenokuba isayithi. Kungaba phantsi kwezitrato okanye efini. Kwiminyaka ezayo isinqumo esibalulekileyo kunazo zonke ozenzayo apho ubeka khona iziko lakho leenkcukacha. Enyanisweni, siya kuqala ukunyamekela ngaphantsi ngaphantsi malunga nokuba isebenza ngaphi, kungakhathaliseki ukuba kusekhofini okanye kwi-rack. Siya kukhathalela ngakumbi malunga nento esinokuyenza kunokuba siyakwenza kunye nendlela yokucwangcisa ngayo.
Kuye ngokususa iinqununu ze-hardware zendawo yokuvelisa enezinto ezinokubangela ukuba bonke abantu - kungekhona ubuncinane: ababukeli.
UJames Stellpflug unamava angaphezu kwama-mabini amava oshishino kuquka ukucwangciswa kwezinto kunye nokudibanisa, umakhalekhukhwini Sathelethi unxibelelwano kunye nomveliso weTV. Kwimisebenzi yakhe, ujongene neenguqu ezininzi zezobuchwepheshe, kuquka ukufuduka kwi-analog ukuya kwidijithali, ukuya kwi-SD HD, kwaye ngoku kutshanje ukusuka kumgca ukuya kufakwa kwi-cloud kunye ne-VOD. I-Stellpflug iye yenzelwe kwaye isebenza ngamaloli okuvelisa, kwakunye nokubonisana nokuphuhliswa kweeplani ze-NLE zakuqala zokuhlela iindaba. Ube naye EVS Isixhobo sokuSasaza ukususela kwi-2000, ukukhonza kwiindima ezahlukahlukeneyo ekulawuleni imisebenzi yobugcisa kunye nolawulo lwenkqubo kwinxaxheba yakhe yangoku njenge-VP yehlabathi yokuthengisa.
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli CES2017 ukudityaniswa Inkundla ye-Ultra HD Injini yeVidiyo	2017-09-09
Previous: I-SMPTE I-2017 Symposium Programme yoLungula kwi-AI kunye noFundo lweeMveliso kwi-Digital Media
next: Umncedisi wokuLawula Umhleli weTitshala kwiveki yeeveki
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso kuwe: "Nge IP Interop Beza kuthi, i-Virtualization yiNqanaba elilandelayo". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/with-ip-interop-behind-us-virtualization-is-next-step/. Enkosi.